Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Amandla oMoya oPhezulu weWizz anokuthwala iziqhamo
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • IHungary Iindaba eziPhulayo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlumayo zase-UK
Njengamazwe amaninzi aseYurophu avumela ukungena okungathintelwanga kubahambi abagonywe ngokupheleleyo, ilizwekazi limiselwe iimfuno eziphakamileyo njengoko ukuzithemba kohambo olufutshane kusakha, okulungele inqwelo moya yaseYurophu.
I-Wizz Air ijonge ukusebenza kumthamo wangaphambi kobhubhane kuyo yonke iAgasti.
Iinqwelomoya ezinamaxabiso aphantsi zimiselwe ukuba zifuneke.
IWizz Air inokuba ligunya laseYurophu kweli hlobo.
Ukubheja kukaWizz Air kwisiphithiphithi sendlela yaseYurophu kunokuhlawula izabelo kumphathi. Iinqwelomoya ezinamaxabiso aphantsi zisetelwe ukuba zifuneke, kwaye umphathi wexabiso eliphantsi unokuba ligunya laseYurophu kweli hlobo.
Wizz AirIxabiso eliphantsi liyakufuneka njengoko lijolise ekusebenzeni ngaphambi kobhubhane kuyo yonke iAgasti. Uvoto lwamva nje lubonakalise isikhundla esomeleleyo sabathwali bexabiso eliphantsi sokubamba ibango lokunyuka, njengoko iipesenti ezingama-52 zabaphenduli behlabathi zilinganise ixabiso / ixabiso njengeyona nto iphambili xa ukhetha uphawu lwenqwelo moya.
Wizz AirIindleko eziphantsi kunye nenethiwekhi ebanzi iya kuyenza ibe yenye yezona zinto zinomtsalane kubanini beli hlobo. Njengamazwe amaninzi aseYurophu avumela ukungena ngaphandle kokuthintelwa kwabahambi abagonywe ngokupheleleyo, ilizwekazi limiselwe ukuba lifuneke ngakumbi njengoko ukuzithemba kuthutha ixesha elifutshane kusakha, okulungele inqwelo moya yaseYurophu.
Uvavanyo lwabathengi lwamva nje (i-Q2 2021) lubonise ukuwa kweepesenti ezi-2 kuphela kwiinkxalabo zabathengi, nge-85% yabaphenduli behlabathi 'besengxakini', 'kancinane', okanye 'bexhalabile' malunga nemeko yabo yezemali, xa kuthelekiswa ne-87% kuvavanyo lwe-Q1 2021.
Kuyo yonke i-H1 2021, uninzi lwezikhundla zabahambi azizange zitshintshe. Abahambi baya kuba nakho ukufuna eyona ndlela inexabiso eliphantsi lokuhamba kwikota ekufuphi ukuze bonge imali njengoko uhlahlo-lwabiwo mali lumi ngxi. Ukubuya ngamandla kukaWizz Air kuya kuthwala isiqhamo. Ngokubuyela kumthamo opheleleyo osondeleyo, abahambi baya kubhuqwa ngenxa yokhetho, kwaye iWizz Air iya kuba ngumthuthi owaziwayo ngenethiwekhi ebanzi kweli hlobo. Uninzi lwabakhuphisana nabo, kubandakanya iAlitalia kunye neNorway Air Shuttle, banciphisile iinqwelomoya, kwaye bakhupha iimarike, beshiya izithuba ezinikezela iWizz Air elona thuba liphambili lokwakha uphawu lwentengiso kwaye liphumelele kwindyikitya yokufa.